BEKOBAY MAHAJANGA : Mbola karohina ilay lehilahy noahiahiana ho namono ny vadiny
Adin’ny mpivady no niantombohan’ny raharaha. Nokarohin’ny fokonolona nandritra ny andro maromaro i Kidany ka herinandro mahery vao hita. 10 septembre 2019
Ny solonifiny sy ny lambany efa rovidrovitra, ny kapany sy ny harona fivarotany felika sisa nahafantarana fa izy ilay poti-taolana sisa nisy nahita. Taolan-tratra kely sy valanorano ambany misy ny solonify sisa hitan’ny fokonolona miaraka amin’ny sandriny. Ny lohany sy ny taolana hafa kosa dia tsy nisy hita intsony. Mpivarotra felika mipetraka ao amin’ny fokontany Matsiadava kaominina Bekobay i Kidany, ka namonjy tsena alakamisy tao Bekobay.
Efa nisy ny tsy fifanarahana teo amin’izy mivady io andro io. Ny zoma dia mbola nandeha nandriorio ny felika sisa tsy lafony izy ary handeha ho any Tsilakanina. Iny no nahitana azy farany. Ny vadiny kosa dia nitondra ny iray tamin’ireo zanany namonjy ny ray aman-drenin’ilay vehivavy, nilaza izy fa hangataka tsodrano satria niady izy mivady ka hoentiny ny zanany. Nanambara kosa ny ray aman-drenin’i Kidany fa tsy afaka hanome tsodrano raha tsy eo ny zanany.
Rehefa nahare izany ilay lehilahy dia nilaza fa handeha ho any amin’ny ray aman-dreniny any Befanjava kaominina Ambalabe. Niandry ny zanany hody ny ray aman-drenin’i Kidany ny harivan’iny saingy tsy nody ny zanany, ka niainga ho any Befanjava hanontany ilay vadiny. Nony tonga tany anefa dia tsy hita tao intsony ilay lehilahy fa ny zandriny sy ny ray aman-dreniny izay efa antitra no tao niaraka tamin’ilay zanany. Namory fokonolona ny fianakaviana nanery ilay zandriny hanoro ny toerana misy ny zokiny hanontaniana ny misy an’i Kidany.
Tsy niraharaha moa ilay zokiny fa namaly hoe “zakao ao ary mahavità ianareo”. Rehefa nanontaniana ny misy azy izy dia mbetika nanambara fa ao Ankaraobato, mbetika ao Bakobay saingy lainga hatrany izany satria rehefa tonga any ny fokonolona hijery azy tsy milaza ny tsy nahita azy ny olona tao. Na izany aza dia niantoka ny fokonolona izay nitady an’i Kidany ny ray aman-drenin’ilay lehilahy. Taty aoriana dia nisy olona nilaza fa nahita fatim-behivavy akaikin’ny tetezana tsy lavitra an’i Tsilakanina ka lasa tany ny fokonolona nijery. Voamarina fa ilay vehivavy notadiavina io efa potipotika sisa io. Nentin’ny fianakaviana anaty harona hanaovana fombafomba sy halevina ilay ampahan-taolana.
Tezitra mafy ny fokonolona ka saika ilay zandrin’ilay lehilahy no nanaovan’izy ireo fitsaram-bahoaka, saingy nisy kosa ny nanome saina azy ireo fa tsy helony izany fa an’ny zokiny. Ity lehilahy ity avy hatrany mantsy no ahiahian’ny fokonolona ho nahavita izao vonoan’olona mahatsiravina izao, nefa dia niteraka telo izy ireo. Nalain’ny ray aman-drenin’ilay vehivavy ireo zaza telo saingy mbola karohina kosa ilay nahavanon-doza.